箴言 26 CCB – Mmɛbusɛm 26 ASCB | Biblica
箴言 26 CCB – Mmɛbusɛm 26 ASCB
1Sɛdeɛ sukyerɛmma te ahuhuro berɛ anaasɛ osutɔ te wɔ otwa berɛ no
saa ara na animuonyam mfata ɔkwasea.
2Sɛdeɛ apatuprɛ tuo anaasɛ asomfena tu danedane ne ho no,
3Ɔkafoɔ abaa wɔ hɔ ma ɔpɔnkɔ, nnareka wɔ hɔ ma afunumu,
na abaa wɔ hɔ ma nkwaseafoɔ akyi.
4Nhwɛ ɔkwasea agyimisɛm so mma no mmuaeɛ,
5Gyina ɔkwasea agyimisɛm so ma no mmuaeɛ
anyɛ saa a ɛbɛyɛ no sɛ ɔnim nyansa.
ɛte sɛ woatwa wʼankasa nan anaasɛ woafrɛ basabasayɛ.
yɛ abɛbusɛm a ɛda ɔkwasea ano.
8Ɛboɔ a wɔakyekyere afam ahwimmoɔ so,
te sɛ animuonyam a wɔde ama ɔkwasea.
9Nkasɛɛ dua a ɛkura ɔkɔwensani no
te sɛ abɛbusɛm a ɛda ɔkwasea ano.
10Deɛ ɔbɔ ɔkwasea anaa obi hunu paa no
te sɛ agyantoni a ɔpira nnipa kwa.
11Sɛdeɛ ɔkraman sane kɔ ne feɛ ho no,
12Woahunu obi a ɔyɛ onyansafoɔ wɔ nʼankasa ani so?
Anidasoɔ pii wɔ ɔkwasea mu sene no.
13Ɔkwadwofoɔ ka sɛ, “Gyata wɔ ɛkwan no mu,
gyata nenam mmɔntene no so!”
14Sɛdeɛ ɛpono di akɔneaba wɔ ne mponterɛ so no,
saa ara na ɔkwadwofoɔ twa ne ho wɔ ne mpa so.
15Ɔkwadwofoɔ de ne nsa si aduane mu,
na ɛyɛ no aniha sɛ ɔbɛyi akɔ nʼano.
16Ɔkwadwofoɔ yɛ onyansafoɔ wɔ ɔno ankasa ani so
sene nnipa baason a wɔdwene asɛm ho na wɔabua.
17Obi a ɔsɔ ɔkraman aso twe noɔ no
te sɛ obi a ɔretwam na ɔde ne ho kɔfra ntɔkwa a ɛmfa ne ho mu.
18Ɔbɔdamfoɔ a ɔtoto atuo
anaa agyan kɔdiawuo no
na ɔka sɛ, “Na mede redi agorɔ!”
20Yensin hi a, ogya dum;
nsekuro nni hɔ a ntɔkwa toɔ twa.
21Sɛdeɛ gyabidie dane gyasramma na anyina dane ogya no,
saa ara na ntɔkwapɛfoɔ hyɛ ntɔkwa mu kutupa.
22Osekuni anom asɛm te sɛ mfremfremadeɛ;
ɛwurawura kɔ onipa akwaa mu nyinaa.
23Sɛdeɛ wɔde dwetɛ fi adura asankago ho no
saa ara na anoɔdɛ kata amumuyɛ akoma so.
24Onipa bɔne kasa te sɛ deɛ ɔyɛ,
nanso nnaadaa ahyɛ nʼakoma ma.
25Ɛwom sɛ ne kasa yɛ dɛ deɛ, nanso ɛnnye no nni,
ɛfiri sɛ akyiwadeɛ nson ahyɛ nʼakoma ma.
nanso nʼamumuyɛsɛm bɛda adi wɔ badwa mu.
27Sɛ onipa tu amena a, ɔbɛto mu;
sɛ onipa pire ɔboɔ a, ɛbɛsane aba ne so.
28Atorɔ tɛkrɛma kyiri wɔn a ɔgu wɔn ho fi,
na nnaadaa ano de ɔsɛeɛ ba.
ASCB : Mmɛbusɛm 26